Indawo Yokubuka Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe - I-Airbnb
Indawo Yokubuka Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe
Johannesburg South, Gauteng, iNingizimu Afrika
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Latani
Izivakashi ezingu-92% zakamuva zinikeze indawo isilinganiso sezinkanyezi ezingu-5.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe iyunithi evulekile efanelekela umuntu oyedwa noma imibhangqwana. It ifakwe internet TV (Netflix iziteshi) kanye Wi-Fi uxhumano. Iminyango yeglasi ephindwe kabili ivuleleke kuvulande onezihlalo zepulangwe kanye netafula, lapho ungahlala khona futhi ujabulele ukubukwa okuhle kakhulu, ingadi enhle ehamba phambili kanye nomsindo nokubona izinyoni. Injabulo nomlingo wale ndlu eyakhiwe ngamapulangwe wukuthi ifakwe phakathi kwezihlahla nezinyoni, okwenza indawo yokuhlala ibe nokuzola, iphumule futhi ibe nomuzwa wokuthi "ikude" nezindawo.
I- Point of View Cabin itholakala eNingizimu yeGoli endaweni yaseGlenvista. It is snuggled phezulu emagqumeni, enikeza ukubukwa panoramic we Klipremeberg Imvelo Reserve. Uma wazisa ubuhle bemvelo, uzowuthanda umbono welanga lase-Afrika njengoba liphuma, ulethe umsebenzi wosuku olude uzolile.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe iyunithi evulekile efanelekela umuntu oyedwa noma imibhangqwana. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe inombhede ophindiwe, itiye /isiteshi sekhofi, i-microwave oveni kanye ne-crockery kanye ne-cutlery. Ineshawa ebiyelwe, umcengezi wesandla nendlu yangasese. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ifakwe i-intanethi ye-TV (iziteshi ze-Netflix) nokuxhumeka kwe-Wi-Fi. Iminyango yeglasi ephindwe kabili ivuleleke kuvulande onezihlalo zepulangwe kanye netafula, lapho ungahlala khona futhi ujabulele ukubukwa okuhle kakhulu, ingadi enhle ehamba phambili kanye nomsindo nokubona izinyoni. Injabulo nomlingo wale ndlu eyakhiwe ngamapulangwe wukuthi ifakwe phakathi kwezihlahla nezinyoni, okwenza indawo yokuhlala ibe nokuzola, iphumule futhi ibe nomuzwa wokuthi "ikude" nezindawo.
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ibekwe emthambekeni ophakeme futhi kufanele ukhuphuke izitebhisi eziphakeme ukuze ungene endlini eyakhiwe ngamapulangwe. Ngakho-ke akubalungele asebekhulile kanye nabantu abanobunzima bokuhamba nokukhwela amagquma nezitebhisi. Indlu eyakhiwe ngamapulangwe ilungele ukuhlala "okulula ukuhamba, okulula nokuphumula".
I-HDTV engu-61" ene- I-Chromecast, I-Netflix
Kukhona njalo umbungazi osesayithini ukunikeza ngolwazi ngokusetshenziswa kwendawo nezindawo ongazivakashela kanye naseGoli
Hlola ezinye izinketho ezise- Johannesburg South namaphethelo